» सुरुङमार्गका नाममा मकवानपुरका पूर्वसांसद ठकुरीले कति गरे घोटाला ? के भन्छन् ठकुरी ?
२०७४ माघ १४,आईतवार १५:०९
-चन्द्र घलान/बलराम पुडासैनी
मकवानपुर, १४ माघ । मकवानपरबाट वि.सं. २०७० सालमा चुनाव जितेका पूर्व सांसद सुवाश चन्द्र ठकुरीले हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङमार्गमा घोटाला गरेको समाचार मिडियामा आएपछि अहिले यो विषयले मकवानपुरमामात्र नभई देशभरि नै सनसनी मच्चाएको छ ।
हेटौँडा काठमाडौँ सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्थापित कम्पनी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडमा सञ्चालकसमेत रहेका पूर्वसांसद सुवासचन्द्र ठकुरीले पनि बदमासी गरेको आरोप लगाइएको छ । त्यतिमात्र होईन जनता टेलिभिजनमा प्रशारित भएको सामाग्री अनुसार उनको पनि यसमा सहभागीता रहेको खुलासा समेत भएको आरोप छ ।
जनता टेलिभिजमा प्रसारण भएको सामाग्री अनुसार ठकुरीले जम्मा एकलाख रुपैयाँ शेयर हालेर मासिक ७७ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको गाडी सुविधा लिएर १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सिध्याएको आरोप लगाइएको छ । सोही कार्यक्रममा शुरुमा आरोपको खण्डन गरेका ठकुरीले पछि भने आफ्नो कमजोरी स्विकारेको समाचार पनि छ ।
४५ मिनेटमा हेटौँडा पुगिने भनेर ५८ किलोमिटर सडक खण्डका लागि बनाइएको ३५ अर्ब रुपैयाँको योजनामा जनताले जम्मा पारेको ३० करोड रुपैयाँ त्यत्तिकै सकिएको बताइएको छ । यसै क्रममा सञ्चालक बनेका एमाले मकवानपुरका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्वसांसद ठकुरीको पनि संलग्नता भेटिएको आरोप लगाइएको छ ।
‘छ महिना पजेँरो चढेको हुँ’, त्यसबाहेक एक रुपैयाँ पनि खाको छैन’–ठकुरी
यस विषयमा तु खबरले पूर्वसांसद ठकुरीसँग प्रश्न गर्दा उनले यो सबै झुटो भएको बताए । सुरुङमार्ग निर्माण हुने दाबी गर्दै पार्टिगत असन्तुष्टि र राजनीतिक अस्थिरताले विभिन्न समस्या निम्ताएका कारण पनि यो ढिलाई भएको उनको भनाई छ । साथै आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने नियतले आफुलाई यो केशमा तानिएको समेत उनको आरोप छ ।
‘यो सरासर झुठ हो, यसमा कुनै सत्यता छैन । मेरो चरित्र हत्या गर्ने नियतले यसो गरिएको हो’–उनले भने । ‘ मैले आफु जनप्रतिनिधि भएकोले गर्दा मकवानपुरे जनताको समेत सपना देखेर योजनाहरु बनाएको छु तर मलाई नै उल्टै प्रश्न तेर्सिएको छ ।’ ‘मैले सुरुङमार्ग निर्माणकै विभिन्न प्रशानिकदेखि कम्पनी दर्तासम्मको कार्यका लागि ६ महिना पजेरो भाडामा लिएर चढेको हुँ त्यो भन्दा अघिपछि पनि गाडी चढेको छु तर पजेरो चढेको होईन ।’ उनले भने ।
उनले सित्तैमा पजेरो चढेको भन्ने विषयमा सुरुङमार्गकै कामको लागि आफु हिँडेको बताए । सुरुङमार्गकै कामका लागि केही खर्च गरिएता पनि १० लाख रुपैयाँ सिध्याएको भन्ने आरोप सरासर गलत भएको समेत उनले दाबी गरे । ‘सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आर्थिक संकलनको क्रममा विभिन्न अवरोध आएतापनि म निरन्तर लागिरहेँ तर जति आर्थिक संकलन भो त्यसले निर्माण कार्यको लागि पर्याप्त पुगेन । त्यसैले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि हामी लागी परिरहेका छौँ , त्यो करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब बन्ने सुरुङमार्ग ८० प्रतिशत विदेशी लगानी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन्छ, उनले भने । उनले दाबीका साथ ढिलोचाँडो सुरुङमार्ग बन्ने दाबी गरे ।
उनका अनुसार नेपाल सरकारले केही प्रतिशत बजेट यस निर्माण कार्यका लागि छुटाएको अवस्था भएको भए विदेशी लगानीको लागि यतिका समय खर्च नहुने समेत उनले बताए । साथै नेपाल सरकारले चासो दिएका दिएको भए सुरुमार्ग निर्माण शुरु भइसक्ने उनको धारणा छ । लगानीकर्ताहरु र शेयरधनीहरुलाई यस विषयमा प्रष्ट पार्न नसकेका कारण पनि आफुहरुप्रति उनीहरुको गलत बुझाई हुनु स्वभाविक भएको उनले बताए ।
हेर्नुहोस् जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘बाइलाइन’–